Tratran'ny Loza tany UAE? Fantaro tsara kokoa ny zonao ara-dalàna! | Orinasa Mpampanoa lalàna
"Ny fomba hiatrehanao ny tsy fahombiazanao no mamaritra ny fahombiazanao." - David Feherty
Avy amin'ny lafiny ara-dalàna, zava-dehibe tokoa ho an'ny mpamily hahafantatra bebe kokoa ny zony sy ny adidiny ka rehefa tratran'ny lozam-piaramanidina UAE dia afaka miaro tsara ny zon'izy ireo. Matetika, ny mpamily dia tsy mahalala afa-tsy ny manana lisansa mpamily - tsy misy antsipiriany momba ny fiantohana, ny fandoavana onitra amin'ny lozam-pifamoivoizana ary ny olan'ny fitsaboana.
Ho amin'ny lafiny azo antoka
Raha miresaka momba ny lafiny ara-dalàna mifandraika lozam-pifamoivoizana UAE, tsy tokony ho raharahan'ny olona momba ny olana momba ny orinasa fiantohana any Dubai, ary ny fandoavana onitra amin'ny lozam-piarakodia amin'ny lalana eny Dubai. Tsy isalasalana mihitsy fa ny fiantohana ny motera ao Dubai dia tena ilaina tokoa.
Miaraka amin'ny politikam-piantohana tsara, ny mpamily dia afaka mahazo antoka fa hiaro tsara ny tenany rehefa miatrika fanitsakitsahana ny zony ara-dalàna, na rehefa miatrika raharaha ara-pahasalamana sy fiarovana. Aza adino - ny tsy fahalalana ny lalàna dia tsy raisina ho toy ny fanamarinana marina avy amin'ny ampitan'ny fitsarana.
Anisan'ny zava-dehibe ny fahalalana fa ny làlana sy ny fitaterana an-tsokosoko na ny RTA ao amin'ny UAE dia niantso ny fanoratana ny fisoratana anarana tamin'ny volana Aogositra 2010. Araka izany dia misy orinasa fiantohana dimy afaka mampihatra ny fisoratana anarana amin'ny fiara rehefa manao ny asany fisoratana anarana fiara. Raha mihoatra ny 3 taona ilay fiara, dia azon'ny tompony fizahan-tena any amin'ireo toeram-panadinana nahazo alalana, anisan'izany i Tasjeel. Avy eo, afaka mivily any RSA, Fujairah, Oman, AXA, Noor Takaful na antoka hafa momba ny fanoratana fiara sy fiantohana.
Azo antoka fa, noho ny fisian'ny fahazoan-dàlana mitondra fiara any UAE, afaka miatrika olana tsara ianao amin'ny lozam-pifamoivoizana an'ny UAE, anisan'izany ny vidin'ny fifamoivoizana, ny lalàna momba ny fiantohana, ary ny lalàna mifandraika amin'izany. Marina izany na hoe miatrika tranga misy alikaola na fanafody zava-mahadomelina ianao, tranga fiara tsy ara-dalàna, na tranga tsy fahita firy toy ny ratra biby na famonoana olona.
Fandoavana onitra amin'ny lozam-pifamoivoizana any amin'ny arabe any Dubai
Ny fiantohana be indrindra ilay fiantohana môtô dia fiantohana be motera indrindra any UAE, Dubai. Marihina fa raha efa antitra ny fiara iray, dia hangatahana ny mpamily mba hiantohana ny fiantohana motor fahatelo. Rehefa tonga any amin'ny fiantohana feno fiara ny fiantohana feno, ny farany dia ny handrakotra ny fiara an'ny mpamily avy amin'ny lozam-piaramanidina UAE, ny fipoahana, ny afo ary ny fandrobana sy ny halatra. Ambonin'izany, andrasana ny manolotra fandrakofana fahatelo ho an'ny maratra na fahafatesana amin'ny ankolafy fahatelo, na noho ny fahavoazana amin'ny fananan'ny mpamily na fiara.
Taorian'ny fiantohana ny môtô feno dia asaina mandalo ny antontan-taratasy manontolo sy ny pirinty farany momba ny fisavana. Ny zavatra dia ny hoe ny politikam-piantohana môtô dia mety miovaova arakaraka ny toe-javatra momba ny fandrakofana ara-jeografika, fandrakofana ho an'ny mpandeha mpamily sy ny olona ao an-trano. Ny olana farany dia ilazana mpiasa, fandrakofana ny fandaniana ara-pitsaboana, fanamboarana ny masoivoho, fiara fanoloana vonjimaika, fanampiana eny an-dalambe, fanampiana tsy misy fitakiana rehefa manavao ny fiantohana ary raha toa ny politikam-piantohana dia mirakitra tranga momba ny fiara mitondra fiara eny ivelany. Raha mitondra fiara any amin'ny firenena GCC ianao, dia asaina manana rakotra antsoina hoe Oman, satria misy komandrafitra Omani manerana ny UAE sy GCC.
Ahoana no fomba hitakiana ny ra any Dubai?
Raha ny lozam-pifamoivoizana an'i UAE dia zava-dehibe ny mahafantatra momba ny Lalàna Islamika na Sharia, hitandrina ny lalàna ary hanatanteraka ny fepetra takian'ny lalàna. Ny rafi-dalàna nampiharina tany Dubai dia azo raisina ho toy ny fitambatra lalàna momba ny heloka bevava sy sivily. Na izany aza, ny emirates hafa dia tsy mampihatra ny lalàna Islamika na Sharia ihany.
Araka ny lalàna sy ny lalàna mifototra any Dubai, raha misy olona mitondra fahavoazana na fahafatesan'ny olon-kafa, dia handoa ilay antsoina hoe Rà na Dirya ny olona taloha, na inona na inona no nahatonga ny fahafatesana ho antony manimba na tsy nahy . Ny Rà amin'ny lalàna Silamo dia manondro ny vola tsy maintsy aloa amin'ny fianakavian'ilay niharam-boina ho valin-karama amin'ny loza. Ny rà ra any UAE dia 200.000 AED, na dia nilaza aza i Sharia fa ny fiainan'ny Silamo iray dia manisa betsaka kokoa amin'ny rà raha mitaha amin'ireo olona manana foko, finoana na finoana hafa.
Ahoana no fomba fangatahana ny ra amin'ny orinasa fiantohana
Raha olona iray, izay nahatonga ny fahafatesan'ny olona iray hafa, no meloka eo ambanin'ny fomba famonoana olona, ​​na tompon'andraikitra ara-dalàna amin'ny fanaovana heloka, heloka na asa ratsy, dia voatery mandoa ny fandatsahan-dra.
Raha te hahafantatra ny fomba hitakiana ny Volan'ny ra any Dubai ianao dia tokony handinika ireo hevitra manaraka ireto:
Tsy fandoavam-bola ny ra raha toa ka misy olona mahatonga ny fahafatesan'ny olon-kafa nefa miezaka miaro tena, ny fianakaviany na ny fananany, na olon-kafa na fianakavian'ity farany.
Ny fianakavian'ny vehivavy dia omena ny antsasaky ny vola ho an'ny lehilahy - 100.000 AED. Na izany aza, ny mpitsara dia miandraikitra ny famaritana ny vola ampidirina amin'ny Ra ra.
Ny tompon'ny biby, izay nahatonga ny fahafatesan'ny olona dia ho tompon'andraikitra ara-dalàna sy mandoa ny rany.
Mpitantana orinasa na tompon'ny tranobe, na olon-kafa tompon'andraikitra no tsy maintsy mandoa vola amin'ny rà raha nirodana ilay trano nahatonga ny fahafatesan'ny olona iray noho ny tsy fitandremana.
Tokony ho fantatry ny iray hoe ahoana ny fangatahana ny Volan'ny ra amin'ny orinasa fiantohana amin'ny alàlan'ny fanaovana olona iray ho tompon'andraikitra ara-dalàna amin'ny fahafatesan'ny fitaovam-piadiana na fitaovana.
Ny tena zava-dehibe, ny vola momba ny ra ao amin'ny lalàna Islamika dia miankina amin'ny hoe manao heloka bevava amin'ny olona iray na maromaro ny heloka bevava. Misy tranga, raha mandoa ny anjarany ny olona izay hita fa meloka. Etsy ankilany anefa, misy tranga, rehefa asain'ny fitsarana ireo olona rehetra ireo mba handoa mitovy saran'ny fahavoazana naterak'izany.
Eritreritra 2 momba ny "Tratry ny lozam-pifamoivoizana iray any UAE? Fantaro tsara ny zonao ara-dalàna! ”
01/16/2017 amin'ny 2:00 PM
Salama tompoko / mam
Ny anarako dia irfan waris efa nanana accedent talohan'ny 5 volana lasa izay. te-hahafantatra aho ny fomba ahafahako mitaky fiantohana azafady manampy ahy amin'ity raharaha ity.
Hira Kyoung Kim
06/16/2017 amin'ny 8:03 PM
Nisy lozam-pifamoivoizana tamin'ny 5 Mey.
Tsy nahita ahy ny mpamily ary nivadika fiara ary nidona mivantana ny lamosiko. Tao amin'ny fijanonana io.
Izaho dia manomana antontan-taratasy dieny izao.
Tiako ho fantatra ny vidiny sy ny fizotran'ny fitsarana.